Uchishandisa mavhidhiyo kusimudzira ecommerce yako | ECommerce nhau
Kushandiswa kwemavhidhiyo kusimudzira ecommerce yako
Vhidhiyo ndiyo fomati yainoburitsa kunyanya kuvimba pakati pevatengi kana vashandisi uye kune kwakatenderedza makumi mana muzana% kutendeuka nekutenda kwavari zvinoenderana nemishumo. Zvichienderana nechikamu chaunoshanda machiri, zvichave nyore uye zviri nyore kugadzira mavhidhiyo madiki anoratidza zvigadzirwa. Kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, iwe usingakwanise kusanganisira mavhidhiyo echigadzirwa chimwe nechimwe, tinokurudzira kuti iwe ubatanidze vhidhiyo isinganzwisisike pawebhusaiti yako, kuitira kuti usimbise chimiro chako chechiratidzo uye kuvimba kwevatengi.
Uye pamwe nekuwedzera kwenhamba yevakwikwidzi mue-commerce, kupinda muvhidhiyo izvozvi kunogona kunge kusiri zano rakaipa. Sekureva kweBrightcove kudzidza, 46% yevatengi yakaratidza kuti vakatenga chinhu nekuona vhidhiyo.
Kutsvaga mazano ekushandisa vhidhiyo kukura rako ecommerce bhizinesi? Muchikamu chino, ndichagovana nzira gumi neimwe dzekugadzira makambani eCommerce kushambadzira zvigadzirwa zvavo nemavhidhiyo. Ngatitangei.
1 Kuvhara kwechigadzirwa
2 Ratidza mashandisiro ekushandisa chigadzirwa
3 Vhidhiyo yeVaraidzo
4 CEO Meseji
5 Inopindirana yevhidhiyo ads
6 Influenza Kutsigira
7 Sanganisira zvipupuriro zvevhidhiyo pawebhusaiti yako
8 Simbisa mavhidhiyo mumaemail
9 Chigadzirwa mavhidhiyo ekutengesa
Imwe yedzakareruka nzira dzekuwedzera kutengesa ndeye kushandisa vhidhiyo yezviratidziro zvechigadzirwa kana kuratidza zvigadzirwa zvakajeka. Mavhidhiyo anoratidza zvigadzirwa kubva kumakona mazhinji uye ekuvhara-kumusoro anogona kupa vanhu nzwisiso iri nani yezvavari kutenga, izvo zvinogona kuwedzera kutendeuka kwekutengesa.
Zvinoenderana neongororo yakaitwa naWyzowl, 80% yevanhu vakati mavhidhiyo ezvechigadzirwa akavapa chivimbo kana vachitenga chigadzirwa pamhepo. Vhidhiyo inopa vatengi nzwisiso iri nani yezvinoita mhete, ichiratidza kubva kwakasiyana mativi uye nekupa iko kwekuswedera-kumusoro. Iko kupenya kunowedzerawo kune inoonekwa runako rwechinhu uye pamwe kunowedzera mikana yekuti mumwe munhu azvitenge.
Ratidza mashandisiro ekushandisa chigadzirwa
Zvimwe zvigadzirwa zvinogadzirwa uye zvichiratidza vanhu mashandisiro azvo zvinogona kubatsira vanhu kunzwisisa kukosha kwechigadzirwa.
Vhidhiyo iyi inotanga nekuratidzira kuti chinhu chacho chinotaridzika sei mupakeji yayo yekutanga uye izvo zvinosanganisirwa. Iye anobva aratidzira muoni kuti inokurumidza sei uye nyore sei kuiunganidza, mabikirwo mukati mayo, uye maitiro ekuisazve pakare kana wapedza. Vhidhiyo inoenderera ichiratidza kuti chigadzirwa chiri nyore kuchenesa uye kutakurika.
Aya maficha angave akaoma kuratidza achishandisa chete static mifananidzo uye zvinyorwa. Asi vhidhiyo pfupi inogona kubvumira vatengi kuti vakurumidze uye nekunyatsonzwisisa zvinoitwa nechigadzirwa uye maitiro ekuchishandisa.
Taura nyaya inomutsa manzwiro
Kutaura kwakanaka uye kugadzira mafirimu kunogona kumutsa manzwiro muvanhu, uye vanhu vanowanzo govana zvemukati zvemukati. Iyo inogona zvakare kuve iri nzira huru yekugadzira ine simba brand mufananidzo.
Muchokwadi, chidzidzo cheGoogle chakaratidza kuti vakadzi vane makore gumi nemasere kusvika makumi matatu nemana vaigona zvakapetwa kaviri kufunga zvakanaka nezvechiratidzo chakaratidza kushambadza kune simba. Ivo zvakare vane makumi masere muzana mukana wekuda, kutaura pamusoro, uye kugovana shambadziro dzakadaro mushure mekuzviona.
Pantene akatanga mushandirapamwe unonzi Chrysalis uyo waive nemusikana matsi airota achitamba violin. Mushure mekushungurudzwa nekusekwa nemumwe wevaaidzidza navo, akapotsa akanda hope dzake. Asi zvino anozoshamwaridza hunyanzvi busker uyo ari zvakare matsi uye anomukurudzira kuti arambe achitamba. Iye anotarisana nematambudziko munzira, asi anoramba achitsungirira. Rova kusagadzikana uye kukunda pakupedzisira, zvichishamisa munhu wese, kusanganisira munhu akapotsa amunyengetedza kuti arege.
Vanhu vanofarira kuvaraidzwa, saka kushandisa varaidzo kunogona kubvumira ecommerce mavhidhiyo kugovaniswa uye dzimwe nguva kuenda nehutachiona.
Imwe yeiyo inozivikanwa mienzaniso yekushandisa varaidzo kukura chiratidzo ndeye "Will It Blendtec" vhidhiyo nhepfenyuro. Muna 2005, Blendtec yakanga iine chigadzirwa chakakura asi chisina kusimba chiziviso cheruzivo. Blendtec CEO uye timu yekutsvagurudza vakaedza musanganisi wavo nekusanganisa mapuranga emapuranga kuyedza kusimba kwechigadzirwa chavo. George Wright, mukuru wekushambadzira weBlendtec, akauya nezano rekuteedzera vhidhiyo kuvhiya uye kutumira mavhidhiyo online.
Nekudyara kwe $ 100 chete, Blendtec yakatumira mavhidhiyo eYouTube eayo blender inosanganisa zvinhu sebindu rake marble, mamarble, uye rotisserie huku. Mavhidhiyo akagadzira anopfuura mamirioni matanhatu ekuona mumazuva mashanu chete. Mushandirapamwe weBlendtec yaive nzira yekuratidzira simba rechigadzirwa chavo nekuvaraidza chero munhu aiona mavhidhiyo avo.
Blendtec yakaramba ichiburitsa aya mavhidhiyo uye muna 2006 kutengesa kwavo kwakawedzera ne700%, zvichiunza mari yekambani kumari inosvika madhora makumi mana emamiriyoni pagore.
Kugadzira vhidhiyo inovaraidza kunotora hunyanzvi, asi inogona kuve nzira huru yekusimudzira yako brand kuziva uye pakupedzisira kugadzira zvimwe kutengesa.
Kuve neiye CEO kana mukuru mukuru kugadzira vhidhiyo inogona kunge iri nzira yakanaka yekuita yako brand uye kukudziridza yakadzika kubatana nevemunharaunda. Mavhidhiyo ane vatungamiriri anogona kuvaka kuvimba uye kushamwaridzana nevateereri panguva yekuziva vanhu vari kuseri kwekambani.
Muchokwadi, ongororo yakaitwa naAce Metrix yakaratidza kuti kushambadza uko kune CEO wekambani kunoita zvirinani pane izvo zvisingaite paavhareji.
Vhidhiyo yaive yakanaka nzira yekuzivisa chigadzirwa uye rega vanhu vasangane neECO. Iyo inoratidzirwa seyechokwadi Raspberry Pi kutaurirana kwete pane yekutengesa imwe.
Ben Brode aishandira Blizzard Varaidzo uye aive anotungamira dhizaina kune Hearthstone, imwe yeanonyanyo kuzivikanwa online makadhi mitambo. Pamusoro pekushandira dhizaini yemutambo, akaitawo basa rakakosha mukushambadza mutambo nekuonekwa mumavhidhiyo ekuburitswa kutsva.
Ramba uchifunga kuti haazi ese kushambadzira ane CEO pairi akaita zvakanaka. Dzimwe dzekiyi dzekubudirira kuzivisa CEO dzinosanganisira:
Vanhu vanofanirwa kunzwa kuti CEO ndeyechokwadi uye ndeyechokwadi.
Iyo CEO inofanirwa kuzvipira kune ino yakareba-zano. Mushandirapamwe unowirirana wekushambadzira unowanzoita zvirinani pane kushambadzira kumwe chete.
Iye CEO anofanirwa kuve akanaka kutaura uye anokwezva. Havasi vese maCEO achave nehunhu chaihwo hwekubata vateereri kuburikidza nevhidhiyo.
Inopindirana yevhidhiyo ads
Sezvo kushambadzira kwevhidhiyo kunova kunokwikwidza, kugadzira mavhidhiyo anopindirana inogona kuva nzira huru yekumira. Sekureva kweongororo yakaitwa neboka revatapi venhau Magma, kushambadzira vhidhiyo kushambadzira kwakatungamira kune 47% kuwedzera mukubatana maringe neasingaenderane kushambadzira uye zvakare kwakawedzera chinangwa chekutenga kusvika kanokwana ka9.
Inopindirana yevhidhiyo kushambadzira yakanaka nyowani, saka unogona kunge usati waona akawanda akatenderedza pano. Asi sezvo makambani mazhinji paanoona kushanda kwawo, angangoramba achikura mukuzivikanwa.
Heano mimwe mienzaniso yekudyidzana vhidhiyo kushambadzira ...
Twitch ipuratifomu inozivikanwa yevatambi vanoda kushambadzira mitambo yemavhidhiyo inozivikanwa, uye imwe yenzira dzavanoita nayo mari ndeyekutendera vateereri kutenga "mabiti" kuitira kuti vagone kufarira yavo yavanofarira Esports timu. Nekudaro, ivo zvakare vanotendera vataridzi kuti vawane "mabiti" mahara nekutarisa inowirirana vhidhiyo kushambadzira.
Mabhizinesi anogona kudyidzana nevanokurudzira kuburikidza nevhidhiyo kunongedza vateereri vane hunyanzvi. Sezvo vanokurudzira vatovaka kutendeseka uye kuvimba nevateveri vavo, kubatana pamwe nevanokurudzira kunogona kuva nzira inokurumidza uye inoshanda yekusvitsa vangangove vatengi.
Wedzera mavhidhiyo kumapeji echigadzirwa
Paunenge uchivaka mapeji echigadzirwa e-commerce yako webhusaiti, ndapota wedzera rondedzero yevhidhiyo yechigadzirwa chakakodzera. Sekureva kweongororo yakaitwa naAnmoto, chishandiso chegore-chakavakirwa chishandiso, vatengi vepamhepo vane mukana wakapetwa kana kuona vhidhiyo tsananguro yechigadzirwa pane kuverenga rondedzero.
Rondedzero yemavara inogona kuverengerwa pamapeji echigadzirwa, asi tsananguro yevhidhiyo inofanirawo kuwedzerwa. Kana mutengi asingadi kuverenga rondedzero, ivo vanogona kusarudza kutarisa vhidhiyo. Nekuwedzera rondedzero yevhidhiyo kumapeji ako echigadzirwa, iwe unozowana yakakwira shanduko chiyero chechigadzirwa chako.
Goverana chigadzirwa tsananguro mavhidhiyo paYouTube. Kugadzira chigadzirwa tsananguro mavhidhiyo uye kugovana iwo paYouTube inzira inoshanda kwazvo yekusimudzira yako ecommerce webhusaiti kutengesa.
Chigadzirwa tsananguro mavhidhiyo ari subset yekutengesa zvigadzirwa mavhidhiyo ayo, ehe, anotsanangura mashandiro echigadzirwa. Ivo vanogona kuve vapenyu-chiito kana hupenyu, asi chinangwa chavo chikuru ndechekudzidzisa vateereri pane zvemukati mashandiro echigadzirwa.
Kana mutengi akanzwa nezve chimwe chezvigadzirwa pane yako e-commerce webhusaiti asi asina kugutsikana zvizere kuti kudyara kwakakosha, vanogona kutsvaga vhidhiyo inotsanangudza nezvayo online.
Kunyangwe chigadzirwa tsananguro mavhidhiyo anogona kugoverwa pane akasiyana mapuratifomu, YouTube kazhinji inopa yakanakira mhedzisiro. Kana iwe uchigovana chigadzirwa tsananguro mavhidhiyo paYouTube, ivo havazongoonekwa chete paYouTube, asiwo muGoogle neBing mhedzisiro yekutsvaga. Vatengi vanogona kutsvaga chigadzirwa chinotsanangura mavhidhiyo vachishandisa chero eaya matatu mainjini ekutsvaga.
Uye, kuenderera mberi nekujekesa simba reYouTube, munhu wese anoziva kuti Google ndiyo inonyanya kutsvaga injini yekutsvaga, asi chinowanzo kufuratirwa ndechekuti yechipiri pakutsvaga injini pasi rese nekutsvaga vhoriyamu ndiYouTube.
Kuziva ichi chidiki chokwadi, hazvishamise kuti Google yakatenga YouTube zvisati zvave kubatsira; zvisinei, zvichiri kundishamisa kuti kune vazhinji savvy ecommerce vatengesi vandinosangana navo mu2019 avo vasiri kushandisa izvi chokwadi kuwana mari yakawanda muchitoro chavo chepamhepo.
Sanganisira zvipupuriro zvevhidhiyo pawebhusaiti yako
Iwe unogona zvakare kushandisa vhidhiyo zvipupuriro kusimudzira zvigadzirwa pane yako e-commerce webhusaiti. Vatengi pavanoona vatengi vekare vachitaura nezve chiitiko chavo chakanaka nechitoro chako chepamhepo muvhidhiyo yechipupuriro, vanozonzwa kunzwa vane chivimbo kupinda mubhizinesi rako nekutenga zvigadzirwa zvako.
Uchapupu hunogadzirwa nevatengi vekare, saka vanopa maonero asina rusaruro webhusaiti yako yeecommerce, zvichireva kuti vatengi vanowanzovimba navo kupfuura kushambadzira kana mamwe mameseji ekutengesa. Uye vhidhiyo zvipupuriro zvinotonyanya kushanda kupfuura zvinyorwa nekuti zvinoratidza mutengi wekare achitaura nezve ruzivo rwavo.
Testimonials anobatsira kutendeuka pane yako saiti nekuti ivo vanowira muchikamu chezvepfungwa zviitiko zvinozivikanwa sehukama hwemagariro. Uye, sekureva kwaRobert Cialdini, mubhuku rake Influence, humbowo hwemagariro chombo chishandiso.
Mushure mekutora mamwe mavhidhiyo ekupupurira, wedzera iwo kune yako ecommerce webhusaiti. Kana ichi chipupuriro chevhidhiyo nezvechitoro chako chepamhepo kazhinji, ndokumbirawo uwedzere kune rako rekumba peji. Kana chiri chipupuriro chevhidhiyo nezve chakasarudzika chigadzirwa, ndokumbirawo uwedzere kune icho chigadzirwa peji.
Isa chigadzirwa zvigadzirwa zvekusimudzira zvakananga kuFacebook
Paunenge uchigovana ekukurudzira mavhidhiyo pane Facebook peji rako reecommerce webhusaiti, ive shuwa kuti ugoisa ivo zvakananga kune yemagariro media network
Facebook inobvumira vashandisi kugovana mavhidhiyo munzira mbiri: kuapinza kana kuaisa zvakananga.
Paunopinza vhidhiyo paFacebook, iwe uri kunyatso kubatanidza kune iyo URL iyo inogarwa pairi, seYouTube kana Vimeo.
Vashandisi vanogona kuona ako ekushambadzira mavhidhiyo paFacebook zvisinei nekuti iwe unogovana sei.
Nekudaro, pane idzo mbiri nzira dzakatsigirwa, iwe unokwezva akawanda maonero nekuisa ako ekushambadzira mavhidhiyo zvakananga kuFacebook.
Iyo pasocial media network inofarira yemuno vhidhiyo yezvinyorwa pane yakadzamidzirwa vhidhiyo zvemukati, saka kurodha mavhidhiyo zvakananga kuFacebook kazhinji kunoguma mune mamwe maonero.
Mavhidhiyo emuno anozokwira kumusoro mumashure evateveri vako, izvo zvinoreva kuti vashandisi vazhinji vanozovatarisa nekuvatarisa.
Simbisa mavhidhiyo mumaemail
Paunenge uchishandisa email kutaura neako e-commerce webhusaiti vateereri, funga kusanganisira akakodzera mavhidhiyo mumaemail ako.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti maemail ane izwi rekuti "vhidhiyo" akawedzerwa kumutsara wenyaya ane 19 muzana angangovhurwa kupfuura mamwe maemail.
Vazhinji vanhu vanofarira kuona mavhidhiyo kuti vaverenge iwo mavara, saka kuwedzera iri izwi rimwe chete kune wenyaya mutsetse wemaemail ako anogona kusimudzira zvakanyanya ako akavhurika mareti. Ehe, iwe unofanirwa kushandisa chete "vhidhiyo" mune wenyaya mutsara weemail kana iyo email iine chaiyo vhidhiyo.
Chengetedza mari yakabhadharwa kushambadzira
Kunze kwekugadzira uye kugadzirisa mari, haufanire kushandisa mari yakawanda kusimudzira yako e-commerce uchishandisa vhidhiyo. Vhidhiyo kushambadzira inzira isingadhuri uye yakaedzwa nguva yekusimudzira chitoro chako chepamhepo. Zvese zvaunoda kuti utange ndeye yako smartphone muhomwe uye neinternet kubatana. Nezvo zvakati, iwe unogona kuwedzera simba rekutengesa revhidhiyo nekutenga yakabhadharwa vhidhiyo kushambadzira.
Kuti utange nezvakabhadharwa vhidhiyo kushambadzira, gadzira Google Ads account uye gadzira mutsva vhidhiyo mushandirapamwe. Zvirongwa zveVhidhiyo zvine vhidhiyo kushambadzira, iyo iwe yaunogadzira nekuisa kune Google Ads, iyo inotamba paYouTube pamwe nemamwe mawebhusaiti paGoogle Ratidza Network. Kunyangwe hazvo mari ichisiyana, unogona kutarisira kubhadhara masendimita gumi nemakumi masere pakuona
Kana iwe uchiri kunyara kutanga nemavhidhiyo kushambadzira, unogona kutsvaga YouTube kana kumwe kunhu kune vadzidzisi; Asi, kana iwe uchida rubatsiro rwehunyanzvi uye kumuka kuti umhanye nekukurumidza, iyo yakanakisa kosi yandawana ndiyo iyo inogadzirwa neAdSkills, inonzi BulletProof Youtube Ads.
Chigadzirwa mavhidhiyo ekutengesa
Iwe haugone kutarisira kuti vatengi vawane yako ecommerce webhusaiti kunze kwekunge iwe uchisimudzira. Vhidhiyo kushambadzira inzira yakasimbiswa yekusimudzira iyo inogona kukwezva vatengi vazhinji kuchitoro chako chepamhepo ichikubatsira iwe kuzadzisa mwero wekushandurwa mukuita.
Ingo rangarira kugadzira emhando yepamusoro mavhidhiyo neako ecommerce webhusaiti tarisiro vateereri mupfungwa. Uye usakanganwe kugadzirisa yako ecommerce kutevedzera uye kutumira iyo iri chokwadi chekuwedzera vhoriyamu kana ako mavhidhiyo atanga kuwana traction.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushandiswa kwemavhidhiyo kusimudzira ecommerce yako
Maitiro ekugadzira peji rekumhara
Maitiro ekuvandudza webhu kurodha kumhanya